UShoprite noCheckers bazobabuyisela imali abathenge imikhiqizo yakwa-Enterprise nakwaRainbow | isiZulu
UShoprite noCheckers bazobabuyisela imali abathenge imikhiqizo yakwa-Enterprise nakwaRainbow
I-EFF ifuna kubhekwe ukudla okudayiselwa abafundi ezikole ngenxa yeListeriosis
Cape Town - Amakhasimende akwaShoprite nawaseCheckers ayanxuswa ukuba abuyisele ezitolo athenga kuzo imikhiqizo yakwa-Enterprise kanye nopholoni wenkukhu wakwaRainbow Chicken ukuze ezobuyiselwa imali yawo, kusho le nkampani esitatimendeni ngoMsombuluko.
Le mikhiqizo kumele ibuyiselwe isasemaphaketheni ethengwe ekuyo - noma isivuliwe - kanti nesiliphu asidingeki.
IFin24 ibike ngaphambilini ukuthi ukubheduka kwe-listeriosis sekubulale abantu abangu-180 kwathi ababalelwa enkulungwaneni bangeniswa ezibhedlela.
Ifemu yakwa-Enterprise Foods esePolokwane kubikwe ukuthi yiyo umsuka walesi sifo.
Imikhiqizo yeShoprite Group edayiswa ngaphansi kweHousebrand, iRitebrand neFarmer’s Deli, yona ayithinteki kulokhu kubuyiswa kwemikhiqizo kulandela isaziso ngemikhiqizo yakwa-Enterprise Foods neyakwaRainbow Chicken.
OLUNYE UDABA: I-EFF ifuna kubhekwe ukudla okudayiselwa abafundi ezikole ngenxa yeListeriosis
Le nkampani ithe imikhiqizo yalolu hlobo yakwaShoprite neyakwaCheckers ayikhiqizwa yilezi zinkampani ezithintekayo.
NgeSonto, izitolo zale nkampani zisuse yonke imikhiqizo ethintekayo emashalofini ayo.
Lokhu kulandela isimemezelo esenziwe nguNgqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke uDkt Aaron Motsoaledi, ngemuva kokuthi ukuhlolwa kwemikhiqizo kuwukhombe efemini yakwa-Enterprise esePolokwane lo bhedukane.
Le nkampani ithembise ngokwenza konke okusemandleni ukusiza uMnyango ulwe nokunqanda lo bhubhane.
Ezimnandi kubashayeli njengoba kuzokwehla intengo kaphethiloli
Abashayeli bazoke bathole ukuphefumula ngoMashi njengoba izokwehla ngo-36 cents ilitha intengo kaphethiloli, kusho uMnyango wezaMandla.
Kulindeleke ehle amanani kaphethiloli ngezayo
I-Automobile Association ithi kulindeleke ehle amanani kaphethiloli ngenyanga ezayo [Mashi].
Ezempilo zenza u-13.9% wesabelomali sikahulumeni kanti ezinye zezinto ezibekwe eqhulwini yiNational Health Insurance, uhlelo lwama-antiretroviral (ARVs) kanye nokusungulwa kohlaka oluzolawula imikhiqizo yezempilo.